အကောင်းဆုံးဖန်လုံအိမ်များ - သင်၏အပင်များအတွက်ရာသီဥတုအေးသောဖြေရှင်းနည်းများ - ကုန်ပစ္စည်းသုံးသပ်ချက်များ
အကောင်းဆုံးဖန်လုံအိမ်များ - သင်၏အပင်များအတွက်ရာသီဥတုအေးသောဖြေရှင်းနည်းများ
ဖန်လုံအိမ်များ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်များ၊ ပျိုးခင်းများ…ဖန်လုံအိမ်များကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးအနှုန်းများစွာရှိသည်။ သူတို့ကအစရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခုအညီအမျှကျယ်ပြန့်ဝတ်ပြုကြလော့။ သငျသညျပျိုးပင်အပင်များစတင်ထွက်ပေါ်လာရန်အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်းတွင်းတစ်လျှောက်လုံးသင့်အရည်ရွှမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ထူးခြားဆန်းပြားသောအိမ်များသိုလှောင်ထားနိုင်သည့်အပြင်ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုပင်ဖြစ်စေ၊ လူအများစုကကောင်းသော၊ ဟောင်းနွမ်းသောဖန်လုံအိမ်အာနိသင်သို့ပြန်လာကြသည်။
သို့သော်သင်သည်ဖန်လုံအိမ်များအကြောင်းအဘယ်အရာကိုသိရန်လိုသနည်း၊ ထိုအရာများကိုသင်လေ့လာပြီးသည်နှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုသင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သနည်း။ စျေးပေါသောအမျိုးအစားများထက်စျေးကြီးသောအမျိုးအစားများအတွက်အကျိုးရှိပါသလား။ သင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒီတော့ဒါကိုလေ့လာကြရအောင်။
Beginners များအတွက်အကောင်းဆုံးဖန်လုံအိမ် - အိတ်ဆောင်လမ်းလျှောက် -In ဖန်လုံအိမ်
အကောင်းဆုံးအသေးစားဖန်လုံအိမ် - Gardman R687 4- Tier Mini ဖန်လုံအိမ်
အိတ်ဆောင်အကောင်းဆုံးဖန်လုံအိမ် - Quictent ခရီးဆောင်ဘဲလ်
အကောင်းဆုံးအကြီးစားဖန်လုံအိမ်: ShelterLogic ကြီးထွားမှုအားကြီးသောလမ်းလျှောက်ခြင်း - ဖန်လုံအိမ်
အကြီးမားဆုံးသောဖန်လုံအိမ်အာနိသင် - Palram Snap & Grow
Giantex ဥယျာဉ်အိတ်ဆောင်သစ်သား Cold Frame / ဖန်လုံအိမ်
Rion Sun အခန်း ၂
ဖန်လုံအိမ် Geodesic အမိုးခုံး
သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာဖန်လုံအိမ်၏ကျယ်ပြန့မှာကြည့်ရှုစေခြင်းငှါနေစဉ်, မျက်စိအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ကျော်မျက်စိ, သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်းအချို့သောအခြေခံရှုထောင့်ရှိပါတယ်။ သင်၏ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုသင်အသုံးပြုနေသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ဤရှုထောင့်များသည်သင့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအရေးပါမှုရှိနိုင်သဖြင့်ပိုမိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
စျေးပေါသောဖန်လုံအိမ်အများစုကိုပေါ့ပါးသောလူမီနီယံပြွန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း၎င်းသည်ရာသီဥတုနှစ်ခုသို့မဟုတ် (တစ်ခါတစ်ရံပိုရှည်နိုင်သည်) အတွက်အဆင်ပြေစွာတည်ရှိနိုင်သော်လည်းသစ်သားသို့မဟုတ်အမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစျေးကြီးသူများသည်ငါကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလူမီနီယမ်ကိုသင့်တော်သောတစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာ၎င်းသည်ပြွန်များထက်အစိုင်အခဲပြားများကိုကိုင်တွယ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး၎င်းသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုထူပြီးပိုလေးသည်။
ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေရန် PVC ကိုသုံးသောအိမ်လုပ်ဗားရှင်းများရှိသော်လည်းစီးပွားဖြစ်ရွေးချယ်စရာများမှာပုံမှန်အားဖြင့်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းဆုံးဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေပါကသင်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ဖန်လုံအိမ်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးသောတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းမရှိပါ။ သင်မာကြောသောဖန်လုံအိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နူးညံ့။ ပေါ့ပါးသောအဖုံးပါရှိခြင်းရှိမရှိဟူသောမေးခွန်းသည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုမူတည်သည်။
အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုအတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်အလင်းပေးဖို့၊ အပြင်မှာထက်ပူနွေးအောင်ထားခြင်း၊ အအေးခံရန်ပန်ကာများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ်အချို့သောရှားပါးသောအခြေအနေများတွင်ရွှံ့အေးများကို အသုံးပြု၍ အတွင်း၌စိုထိုင်းဆကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်သင် hard panel option ကိုလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ယခုမာကျောသောပြားပြားအများစုသည်လေဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ဆီးနှင်းနှင့်ရေခဲတောက်ပမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းထားပေးသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောကာဗွန်နိတ်နံရံများမှပြုလုပ်သည်။
သငျသညျအလေးချိန်အနည်းငယ်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရာသို့မဟုတ်သယ်ဆောင်နိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာလျှင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် polyethylene အဖုံးပစ္စည်းသို့မဟုတ် PVC ထည်ကိုရွေးချယ်ချင်ပေလိမ့်မည်။ အပြင်ဘက်လေထုထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းနွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကောင်းသောဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သည့် rip-stop ဗီနိုင်းရွေးစရာများလည်းထွက်ရှိသည်။ ဤရွေးချယ်မှုများသည်နှစ်၏အေးခဲသည့်လများအတွင်းကြီးထွားမှုကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်ရန်ရှာဖွေနေကြသောအခြေခံအိမ်တွင်းဥယျာဉ်မှူးများအတွက်အဆင်ပြေသော်လည်း၊ သူတို့သည်မိုးသည်းထန်စွာဆီးနှင်းများကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးမကြာခဏအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။
ငါတို့ဟာဆီးနှင်းအလေးချိန်အကြောင်းပြောနေရင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေး၏ကြံ့ခိုင်မှုသည်အဓိကကျသည်။ သင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ပါကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမျက်ရည်ယိုခြင်း၊ ထိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စောင်းခြင်း၊ သငျသညျလေထန်areaရိယာ၌နေလျှင်ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖုံးများရွက်တူသောပြုမူခြင်းနှင့်က staked မပါလျှင်သင့်ရဲ့ဖန်လုံအိမ်ပျံသွားစေနိုင်သည်။
သင်၏ဖန်လုံအိမ်၏ဒီဇိုင်းကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားလျှင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ပျော့ပျောင်းသောအဖုံးနှင့်ထိုအဖုံးအတွင်း၌တိကျစွာလိုက်ဖက်။ နေရာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထားသောဘောင်နှင့်ချိတ်ထားပါကဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးသည်အနည်းငယ်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ ၎င်းကိုအပင်များဖြင့်အလေးထားခြင်းသည်အနည်းငယ်သောအလွဲသုံးစားမှုကိုခံရပ်ရန်သာကူညီလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်သာလုပ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်မဝယ်မီသင်၏ရာသီဥတုအခြေအနေကိုစဉ်းစားပါ။
သင့်မှာကျောပိုးအိတ်သေးသေးလေးရှိလား၊ ဒါမှမဟုတ်ကစားစရာaက ၂ စုံရှိသလား။ ဒါကသင့်ရဲ့ဖန်လုံအိမ်လိုအပ်ချက်ကိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေတယ်။ သင်၌ခြံငယ်တစ်ခြံရှိပြီးသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာအားလုံးသည်သင်၏ခြံရှိအခြားနေရာများတွင်အစားထိုးစိုက်ပျိုးရန်အပင်အချို့ကိုဖြန့်ဖြူးနေလျှင်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုကိုသင်မလိုအပ်ပေ။ အကယ်၍ သင်သည်anက (သို့) twoက (၂) ခုရရှိပါကပိုမိုကြီးမားသောဖန်လုံအိမ်တစ်ခုသည်သင့်အားမျိုးစေ့များစတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးသင်၏အပင်ငယ်များအတွက်အစားထိုးရာသီမရောက်မှီပျိုးခင်းတစ်ခုပေးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ပိုမိုကြီးမားသောဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အချို့ကိုနွေရာသီတွင်အရိပ်ဖုံးခြင်းနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်နွေးထွေးခြင်းတို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဤတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြီးထွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Hydroponically ကြီးထွားပါက၎င်းသည်သင့်အားအပြင်ဘက်ရှိကန်များအတွင်းသို့ကျပန်းအင်းဆက်ပိုးမွှားများသို့မဟုတ်စက်ရုံမှအရာဝတ္ထုများကိုဆင်းသက်ရန်မလိုဘဲသင်လိုအပ်သောအလင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးသင်၏ပန့်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဖန်လုံအိမ်သည်နေရောင်ခြည်မှအပူကိုဖမ်းယူရန်စိတ်ကူးယဉ်နေသော်လည်း၎င်းသည်နေ၏ပူနွေးမှုကိုတိုးမြှင့်စေသောကြောင့်၎င်း၏မီးဖိုချောင်သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ပူပြင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်၌၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ ပိုလျှံသောအပူမှလွတ်မြောက်ရန်သင့်တော်သောလေဝင်လေထွက်လိုအပ်သည်။
စိုထိုင်းဆနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများမှကာကွယ်ရန်သင့်တော်သောလေဝင်လေထွက်လိုအပ်သည် အမှုန့်များအနာ ။ သင်၏အပင်များတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်စီးဆင်းမှုမလုံလောက်ပါကအခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ လေထွက်ပေါက်များနှင့်တံခါးများကိုဖွင့်နိုင်ခြင်း၊ နှစ်ဖက်စလုံးကိုလှိမ့်ခြင်းစသည်တို့သည်လေကောင်းလေသန့်အတွက်လေကောင်းလေသန့်လိုအပ်သည်။
ဒီသည်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အစောပိုင်းတွင်သူတို့၏ဖန်လုံအိမ်များကိုစင်ပေါ်မတင်ပေးကြပါ၊ အခြားသူများသည်မူဘောင်ကိုအားဖြည့်ရန်အတွက်၎င်းကိုဘောင်အတွင်းသို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အချို့ကမူစင်ပေါ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော်လည်းမြင့်မားသောနေရာများသို့ရောက်ရန်သင်၏အပင်များထိုင်နေသည့်အဆင့်ကိုညှိနိုင်အောင် modular လုပ်ပါ။ ငါ့အဘို့, modular စင်ပေါ်, အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်, အထူးသဖြင့်ငါအသစ်စက်ရုံများစတင်သောအခါ။ သို့သော်သင်၏လိုအပ်ချက်များကွဲပြားနိုင်သည်။
သင့်တွင်ရာသီဥတုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိအပူရှိန်၊ စိုထိုင်းဆကိုနှစ်သက်သောအပင်များစုဆောင်းထားပါကသင်၏ဖန်လုံအိမ်၏လုံခြုံရေးနှင့်အကာအကွယ်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ အခြားအဖိုးတန်သော (သို့) ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအပင်များသည်လုံးဝပိတ်ထားနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုမလိုချင်သော guests ည့်သည်နှစ် ဦး အားဖြစ်စေ၊
သော့ခတ်ထားသောတံခါးပါသောဖန်လုံအိမ်တစ်ခုရှာရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းအချို့သောဟယ်ရှယ်လ်ရွေးစရာများကအနည်းဆုံးသင်၏အပင်များကိုလုံခြုံစေရန်သီးခြားသော့ခတ်ခြင်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်ရုံသင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျှင် လမ်းဘေး အိမ်နီးချင်း၏စျေးကြီး felines ထံမှစုဆောင်းခြင်း, ဒီမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီ option ကိုရံဖန်ရံခါရရှိနိုင်ကြောင်းသိရန်အမြဲကောင်းပါတယ်!
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာရာနှင့်ချီသောအမျိုးအစားများရှိသည်။ သင်၏ကြီးထွားလာနေသောလိုအပ်ချက်များအတွက်သင်အထူးလိုအပ်သည်ကိုချက်ချင်းမတွေ့ပါကသင်ရှာဖွေလျှင်၎င်းသည်ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဆက်၍ ကြည့်ပါ။
အိတ်ဆောင်လမ်းလျှောက် -In ဖန်လုံအိမ်
အမျိုးအစား: softcover, အလတ်စား
ပစ္စည်း အမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တု၊ ရေစိုခံ PVC အဖုံး
အရွယ်အစား: အရပ်ရှည်ရှည် 49 'ကျယ်ပြန့်က x 75' နက်ရှိုင်းသော x 75 '
အလေးချိန် 24.8 ပေါင်
အင်္ဂါရပ်များ: လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန်လွယ်ကူစေရန်ခတ်လုံခြုံစေရန်စင်ပေါ် (၈) ခု၊ ချိတ်နှင့်ကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှု။ လုံခြုံမှုရှိစေရန်မြှုပ်နှံနိုင်သောအောက်ခြေချဲ့စက်များရှိသည်။ မှတ်ချက် - လေမလုံဘူး။
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသူများသည်၎င်းတို့အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည်ကိုမသိရပေ။ ကြီးထွားလာတဲ့ရာသီကိုအေးတဲ့လတွေအထိတိုးချဲ့လို့လား။ နွေ ဦး ရာသီအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အစေ့ကိုစတင်ရန်? ၎င်းသည်တိကျသောအပင်အမျိုးအစားများအတွက်လေထုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစောင့်ကြည့်နေသလား။ ထိုအတွေ့အကြုံမရှိဘဲ, အဘယျသို့လိုအပ်သောဖြစ်အံ့သောငှါဆုံးဖြတ်ရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဒီလမ်းလျှောက် -in ကိုဖန်လုံအိမ်နေရာလေးကိုအတွက်လာရှိရာပါပဲ။ သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်းဖြင့်အမြဲတမ်းကိုင်ထားမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အနည်းဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အထိအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နေရာများစွာ၊ စင်ပေါ်များစွာနှင့်ပိုးမွှားကာကွယ်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သောပမာဏရှိသည်။ ပျော့ပျောင်းသော PVC အဖုံးသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကပ်ထားခြင်းထက်ဖွတ်။ ကပ်ထားခြင်းကြောင့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပင်လေထန်သောပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများအတွက်မသင့်တော်ပါ။
Gardman R687 4- Tier Mini ဖန်လုံအိမ်
ရောင်းမည် Gardman R687 4-Tier Mini Greenhouse၊ ၂၇ 'ရှည်သော ၁၈' Wide x 63 'အမြင့်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း polyethylene အဖုံးနှင့် roll-up, ဇစ်တံခါးကို ...
အမျိုးအစား: softcover သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား
ပစ္စည်း Tubular သံမဏိ, polyethylene
အရွယ်အစား: 27 'ကျယ်ပြန့်က x 18' နက်ရှိုင်းသော x ကို 63 'အရပ်ရှည်ရှည်
အလေးချိန် 11.8 ပေါင်
အင်္ဂါရပ်များ:4စင်ပေါ်, လေကာကွယ်မှုများအတွက်သတ္တုလောင်းနှင့်ကောင်လေးလိုင်းများနှင့်အတူပါရှိသည်။ ရှေ့တံခါးဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ အစားထိုးအဖုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကတကယ်တော့ဒီစာရင်းထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်, ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်တစ်ခုလုံးမလိုအပ်ဘဲ၎င်းသည်အေးသောလများအတွင်းအစေ့များစတင်ရန်လုံလောက်သောအခန်းကိုပေးသည်။ ဆန္ဒရှိပါက၎င်းကိုအိမ်တွင်း သုံး၍ ခြေရာများအလုံအလောက်ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင်စင်ပေါ်တစ်ခုစီ၏အောက်ခြေတွင်ကြီးထွားလာသောမီးများပါသောကားဂိုဒေါင်တွင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီးအပင်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်နိုင်သည် နွေ ဦး ။
အပြင်ဘက်လေကိုထောက်ပံရန်အတွက်လောင်းကြေးများနှင့်လူလိုင်းများပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်အထူးသဘောပေါက်ပါသည်။ အလွန်နည်းပါးသောအခြား polyethylene မော်ဒယ်များကြောင်းပိုတည်ငြိမ်မှု၏နည်းနည်းကိုဆက်ကပ်။ ၎င်းသည်စင်ပေါ်များအတွက်အနည်းငယ် ပို၍ လုံခြုံရန်လိုအပ်သော်လည်းဇနီးမောင်နှံနှစ်စုံသည်လှည့်ကွက်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အလုံးစုံတို့မှာအကောင်းဆုံးသေးငယ်သောဖန်လုံအိမ်ကိရိယာအစုံအလင်ကိုကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်အမင်းမလိုအပ်သောသူများနှင့်အာကာသကိုကန့်သတ်ထားသူများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ပစ္စည်း အမှုန့် -coated သံမဏိ, ရေစိုခံ PVC အဖုံး
အရွယ်အစား: အမြင့် 71 'ကျယ်သော x ကို 36' နက်ရှိုင်းသော x ကို 36 '
အလေးချိန် ၇ ပေါင်
အင်္ဂါရပ်များ: အဖုံးတွင်ဖွင့်ထားသောချည်နှောင်ထားသောဇစ်ပါ ၀ င် / လေဝင်လေထွက်ဝင်ပေါက်လေးခုရှိသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော, ရှည်လျားသောကြံစည်မှုကျော်ထိုင်ရန်ဒီဇိုင်း။ သာ3'' အရပ်ရှည်ရှည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ခရီးဆောင်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အိတ်ဆောင်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုလိုအပ်ခြင်းကိုရှာမတွေ့သော်လည်းအများအားဖြင့်ဖန်စီအအေးဘောင်များဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။ ပေါ့ပါးပြီးလှည့်ပတ်သွားလာရန်လွယ်ကူပြီးရာသီဥတုအေးသွားလျှင်မြန်ဆန်သောအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဒီအိတ်ဆောင်ဖန်လုံအိမ်ကိရိယာတန်ဆာပလာဆောက်လုပ်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောခရမ်းချဉ်သီးအပင်များသို့မဟုတ်တောင်တက်သမားများအပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော်လည်းလေမှကာကွယ်မှုအချို့ရရန်ကြိုးနှင့်တိုင်များ (မြေမပါ) ဖြင့်လုံခြုံစွာထားနိုင်သည်။ အားလုံးခြုံပြီးပြောရရင်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေ့လျားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာရွေးချယ်စရာကောင်းပါတယ်။
ShelterLogic ကြီးထွားမှုအားကြီးသောလမ်းလျှောက်ခြင်း - ဖန်လုံအိမ်
အမျိုးအစား: softcover, ကြီးမားတဲ့
ပစ္စည်း အမှုန့် -coated သံမဏိ, rip-stop ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်လွန်
အရွယ်အစား: အမြင့် 12 'ကျယ်ပြန့်က x 20' နက်ရှိုင်းသော x 8 ''
အလေးချိန် 312 ပေါင်
အင်္ဂါရပ်များ: အလွန်ကြီးစွာသော, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်း။ လေနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြံ့ခိုင်ပြီးအလေးချိန်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အပြည့်ပါ ၀ င်လဝက်ကွက်အပေါက်များပါ ၀ င်သည်။ အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးမှတံခါးပိတ်များကိုဖွင့်ထားသည် အစားထိုးရရှိနိုင်ပေမယ့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အဖုံးများ။
အဆိုပါ ShelterLogic ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ် - တန်းကြီးထွားလာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး, ဒါဟာကြီးမားတဲ့ပါပဲ။ ဤသည်ဖန်လုံအိမ်သည်ဘက်စုံသုံးလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတွင်းရှိအပင်များကိုသန်မာ။ အကာအကွယ်ပေးပြီးပိုမိုကြီးမားသောသဘာဝအလင်းကိုတပ်ဆင်ထားသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည် တဲဆောက်ပါ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤသည်အကောင်းဆုံးကြီးမားသောဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ရွေးစရာဖြစ်ရန်မလိုပါ။
Palram Snap & Grow
အမျိုးအစား: hardcover အလတ်စားမှကြီးမားသော
ပစ္စည်း UV ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော polycarbonate ခေါင်မိုးနှင့်ဘေးထွက်ပြားများဖြင့်လူမီနီယမ်
အရွယ်အစား: ရှည်လျားသော6'ကျယ်ပြန့်က x 8' နက်ရှိုင်းသော x7''
အလေးချိန် 118,8 ပေါင်
အင်္ဂါရပ်များ: မိုsnow်းပွင့်၊ လေ၊ built-in ခေါင်မိုးအပေါက်များနှင့်အပိုလေဝင်လေထွက်များအတွက်အုပ်စုခွဲတံခါးကိုရှိပါတယ်။ ပိုလီကာဗွန်နိတ်ပြားများသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုစစ်ထုတ်ပြီးအတွင်းရှိအပင်များကို ၉၀% အလင်းဖြန့်ဝေပေးသည်။ အလွန်ပိုးမွှားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လက်အိတ်များနှင့်စုဆောင်းရန်အချို့ကိရိယာများလိုအပ်သည်။
Palram Snap & Grow သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ရာသီဥတုအခြေအနေအားလုံးနှင့်အမှန်တကယ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အရာတစ်ခုကိုလိုချင်ပါက၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတွင်း၌အလုပ်လုပ်ရန်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုလီကာဗွန်နိတ်ပြားများသည်နေရောင်ခြည် ၉၀% ခန့်ကိုအပင်များသို့စိမ့်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ပူနွေးသောပတ်ဝန်းကျင် (အထူးသဖြင့်တံခါး၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအပူထုတ်လွှတ်ရန်အတွက်ဖွင့်လျှင်) နှင့်အပင်များသို့ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေသည်။ ကောင်းပြီ ၎င်းကိုအလွန်အဆင့်မြင့်သောနေရာတွင်ထားပါ။
Giantex ဥယျာဉ်အိတ်ဆောင်သစ်သား Cold Frame ဖန်လုံအိမ်ပန်းပွင့်စိုက်ပျိုးသူများအတွက်အကာအကွယ်ပေး ...
ခေါက်သိမ်းနိုင်သော - ဒီကုန်ပစ္စည်း၏ထိပ်ဆုံးနှစ်ခုက ...
Beautify အစိမ်းရောင် Spaces နှင့်ကြီးမားသောစွမ်းရည် - ကြီးမားသော ...
အစိုင်အခဲဖွဲ့စည်းပုံ - လေးလံသောသစ်သားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် ...
အမျိုးအစား: hardcover သေးငယ်သည်
ပစ္စည်း သစ်သား, polycarbonate glaze ဘုတ်
အလေးချိန် အလေးချိန်သည်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်
အင်္ဂါရပ်များ: မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်တံခါးသော့များနှင့်ရှေ့တံခါးများဖြင့်ချိတ်ထားသည့်ထိပ်တန်းတံခါးတစ်ခုရှိသည်။ ခိုင်မာသောဆောက်လုပ်ရေး၊ နှင်း၊ မိုးနှင့်လေအခြေအနေများကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အသေးငယ်ဆုံးပုံစံသည်မြေဆီလွှာပေါ်တွင် cloche ကဲ့သို့တိုက်ရိုက်ကျသော်လည်းအခြားမော်ဒယ်များမှာ potting table / cold frame hybrid၊ စစ်မှန်သောသေးငယ်သည့်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောအောက်ခြေရှိအအေးဘောင်ပုံစံကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။
Giantex မှထုတ်လုပ်သောပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အားလုံးသည်တူညီသောအမျိုးအစားအောက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်သစ်သားဘောင်တည်ဆောက်မှုကိုပေးထားပြီးစတိုင်ကျ။ ခြံဝင်းအတွင်းအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းစတိုင်တစ်ခုစီကွဲပြားနိုင်သည်။ သငျသညျ fancier အအေးဘောင်သို့မဟုတ်ကက်ဘိနက်ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ဖန်လုံအိမ်ကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ, ဤ hardcover ရွေးချယ်စရာလေနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံဖြစ်ကြသည်။
Rion Sun Room2ဖန်လုံအိမ်၊ ၆ 'x ၁၀'
ခေါင်မိုးပြားများသည် ၁၀၀% ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ၄ မီလီမီတာအမြွှာနံရံ ...
၃ မီလီမီတာအထူ Acrylic နံရံပြားများသည် UV 100% ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: Hardcover, ကြီးမားသည်
ပစ္စည်း ဗဓေလသစ်ဘောင်, dual-pane ကို polycarbonate ပြား။
အရွယ်အစား: အရွယ်အစား6'x 6' 8 'x 20' အထိအကွာအဝေး။
အလေးချိန် အရွယ်အစားအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်အငယ်ဆုံး 176 ပေါင်ဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံး 568.1 ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂါရပ်များ: Dual-pane ၀ င်းဒိုးပြားများသည်အပြင်ဘက်ရာသီဥတုမှထပ်ကာထပ်ကာထပ်မံကာကွယ်သည်။ လုံခြုံသောအပြင်ဘက်တံခါးနှင့်အတူခေါင်မိုးပြားများအတွင်းအပေါက်များပါရှိသည်။ ဤသည်ကိုအိမ်၏ဘေးထွက်တွင်တပ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အပြင်နံရံသုံးခု + sloped roof ရှိသည်။
မင်းမှာအိမ်ကြီးကြီးရှိတယ်၊ ခြံကျယ်ကြီးရှိတယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံမှာအနားယူလို့ရမလား။ ဒီဟာမင်းအသံနဲ့တူလား သို့ဆိုလျှင် Rion Sun Room သည်ထူးခြားသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်၏ဘေးဘက်နှင့်ကပ်လျှက်ရှိပြီးရာသီဥတုအခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်၌ပင်သင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လုံခြုံသောနေရောင်အခန်းတစ်ခန်းကိုဖန်တီးပေးသည်။ ပိုကောင်းသေးသည်, ဒါကြောင့်ပြတင်းပေါက်အခန်းတစ်ခန်းအဘို့ကြီးသော insulator တွင်လည်းပေးသော dual-paned ပြတင်းပေါက်ပြားပါပဲ။ အကယ်၍ မင်းမှာပိုက်ဆံပိုများပြီးအကောင်းဆုံးကြည့်လို့ရတဲ့ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိလိုလျှင်၊
ဖန်လုံအိမ် Geodesic အမိုးခုံး 16 FT ။ Hydroponic Gardening အတွက် Marine Poly Cover နှင့်အတူ
Galvinized သံမဏိကိုယ်ထည် 1/2 '
geodesic ဒီဇိုင်း - လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် ...
အမျိုးအစား: Semi-Hard အဖုံး, ကြီးမားတဲ့
ပစ္စည်း သွပ်ရည်စိမ်သည့်သံမဏိဘောင်၊ ၇ မီလီမီတာအဏ္ဏဝါ Poly ကျုံ့အဖုံး
အရွယ်အစား: 16 'ပတ်ပတ်လည်
အလေးချိန် 229 ပေါင်
အင်္ဂါရပ်များ: ရှေ့တံခါးကိုလုံခြုံစွာပိတ်ခြင်း။ လိုအပ်ပါကပြည်တွင်းပန်ကာများနှင့်အပူပေးစက်များကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီးရရှိနိုင်သည့်အာရဇ်ပင်တံခါးလည်းရှိသည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးပလတ်စတစ်ကိုထူစေသည့်တင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ထားရန်အဖုံးသည်ဘောင်တွင်ချထားသည်။ အပူမှလွတ်မြောက်ရန်အပေါက်များသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်တံခါးတစ်ခုလိုအပ်နိုင်သည်။
နယူးယောက်သို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည့်အခြားဒေသများတွင်သင်နေထိုင်ပါကသာမန်အားဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောအရာများကိုပြက်ယယ်ပြုသည်။ သို့သော်သင်သည် ၁၆ ပေပတ် ၀ န်းကျင် geodesic အမိုးခုံးကိုမထီမဲ့မြင်မပြုသင့်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းပစ္စည်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော poly shrink အဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်က၎င်းကိုဘောင်ပေါ်သို့ချပြီးလျှင်တစ်ဝက်တင်းကျပ်။ ပိုထူလာသည်။ ဒီဖန်လုံအိမ်အစုံသည်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသော geodesic အမိုးခုံးဘောင်နှင့်အဏ္ဏဝါအဆင့်ရှိ Poly ကျုံ့အဖုံးနှင့်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည်။ အရွယ်အစားကြီးထွားလာသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသိုမှီးထားနိုင်သောကြီးမားသည့်အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်။ ဆောင်းရာသီ၏အအေးဆုံးတောင်မှခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ကြီးမားသောဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ hardshell အပြင်ဘက်ဖြစ်စေ၊ ပျော့ပျောင်းသော PVC သို့မဟုတ် polyethylene ဖြစ်စေ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်ဖန်လုံအိမ်ရှိသည်။ သင်အသုံးပြုရန်သင်စီစဉ်ထားသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ သင်ကျွန်ုပ်အကြံပြုထားသည့်ရွေးချယ်စရာများထဲမှရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် (သို့) သင်၏အိပ်မက်ကိုဖန်လုံအိမ်တည်ရှိသည်အထိရှာဖွေနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ဖန်လုံအိမ်ကိုဘာအတွက်သုံးတာလဲ မှတ်ချက်များအတွက်ငါနှင့်အတူကမျှဝေပါ!
ကလေးမျက်ရည်စက်ရုံ - Soleirolia Soleirolii ကိုမည်သို့ကြည့်ရှုရမည်နည်း
Kalanchoe ကိုဘယ်လိုပျံ့နှံ့စေမလဲ - များစွာသော Petaling
Microbiota Decussata: အပင်ငယ်၊ ကြီးထွားမှုနည်းသောမြေအဖုံး
ခေါင်သုံးဆယ်အတွက် DIY Pallet ဥယျာဉ်တည်ဆောက်ရန်
ခရမ်းချဉ်သီးအပင်များပေါ်တွင်အဖြူရောင် bugs အနည်းငယ်သာရှိသည်
non gmo မဟုတ်သောမျိုးစပ်အော်ဂဲနစ်မျိုးစေ့များ